MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: “Dalka laguma sii-hayn karo KMG, mana jirto duruuf kallifaysa in KMG lagu sii jiro” | Calanka Somalia
Liiska Magacyada 135-ta oday dhaqameed ee soo xulaya ergooyinka ansixinaya dastuurka iyo qabaailka ay ka ka soo kala jeedaan →
MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: “Dalka laguma sii-hayn karo KMG, mana jirto duruuf kallifaysa in KMG lagu sii jiro”
Axad, May 06, 2012 (MMG) — Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed oo hadal dheer ka jeediyay kulankii furitaanka shirkii odayaasha-dhaqanka ee Muqdisho ka furmay ayaa sheegay inaanu dalka ku jiri karin KMG, isagoo xusay inaysan jirin duruuf kallifaysa in lagu sii jiro.
“Ku-meel-gaarnimo wax ummad lagu hayo ma ahan, duruuf kallifaysana ma jirto in KMG ku jiro, sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan in dadaal lagu bixiyo sidii looga bixi lahaa,” ayuu yiri Sheekh Shariif. “Haddii aan kaftamo, KMG-nimo dhibka ay leedahay aniga hala i weydiiyo,” ayuu Sheekh Shariif ku kaftamay.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay dastuurka ayuu sheegay inaysan jirin ummad noolaan karta dastuur la’aan; isagoo sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dastuur la sameeyo, balse ay ugu horreysay 1960-kii, wuxuuna intaas raaciyay in sannadihii burburka loo baahday in la sameeyo dastuur dhameysiran.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in wax walba oo bani’aadam uu sameeyo ay nusqaan ku jirto, sidaa daraadeedna uu hadda soo gaaray dastuurka, wixii hadda ka dambeeya uu gaari doono dhamaan ummadda Soomaaliyeed.
“Dadka waxa kala gaara waa dowladnimo, waa cadaalad, waxaana saldhig u ah dastuurka. Innagoo heli karna inaan wax dhisno waa laga wanaagsan yahay inaan wax duminno,” ayuu Sheekh Shariif ku sheegay khudbaddiisa.
Sheekh Shariif wuxuu sheegay in arrimahaas haddii sida ay yihiin loo hirgelinno sida ay yihiin in la gaarayo deggenaasho buuxda oo dalka kusoo laabata, maamullada degmooyinka iyo gobollada oo dhisma, hay’adaha dowladda oo xoogeysta iyo Soomaaliya oo dib ula soo laabata karaamadeedii.
“Waxaan doonaynaa in siyaasadda dalka lagu raadiyo waxqabad ummadeed lagana shaqeeyo horumarkeeda, mana ahan wax la aqbali karo duminta ummadda iyo dhibaateynteeda,” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dhibaatooyin badan lasoo maray oo ay ka mid yihiin qabiil, fowdo, dowlad la’aan iyo Shabaab iyo Al-Qaacida, isagoo xusay in loo baahan yahay in waxyaabahaas oo dhan laga faa’iideysto oo laga shaqeeyo sidii lagu soo celin lahaa qarannimadii Soomaaliya.
“Dowladihii KMG ahaa ee dalka soo maray caqabadaha ugu badan ee ay wax ka qaban waayeen waxay ahaayeen KMG-ka, sidoo kalena waxaa ka mid ahaa sharciga lagu dhaqmayay oo ahaa kuwo aan la jaan-qaadi karin waxyaabihii lasoo maray,” ayuu yiri Sheekh Shariif.